Published on : March 02, 2011
नियात्रा <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
'आज रातभरिमा तीन-चार कार्यक्रम नबनाई भएकै छैन !'
अग्ला आलिशान घरहरू । सडकको झिलिमिली चौपट्टै । म अनुहार झलमल्ल बाल्दै मनका उत्तर दिइरहेछु आँखाले पढ्दै ।
छयालीस स्ट्रीट पुग्यौँ । कारका लस्कर छन् आँखाले नभ्याउने । मान्छेको हुल झन् उत्पातको छ, छ ।
भाइलाई फुर्सद कम छ । उनी न्युयोर्कको नेपाली समाजलाई एक बनाउन खटिरहेका छन् । उनी अर्थात् सहदेव पौडेल ।
हिमाली स्वरहरू, अमेरिकामा प्रसिद्घ छ यो अनलाइन रेडियो । धेरै वर्ष भो यसले अमेरिकाली समाजमा नेपाली भावना, सोच र परिचयका लागि समय खर्चेको ।
'यति ब्यस्त ठाउँमा कसरी मिलाउनु हुन्छ चाँजोपाँजो ?'
'एकलो छु । धेरै कमाउने चाहना छैन । आठ घन्टा काम गर्छु ।'
'अनि यति कमाइले पुग्छ त ?'
'पुर्‍याउनु पर्छ । कम सुत्छु । अनि रेडियो बचाउन सकेको छु !'
'धन्य छ भाइ !'
निकै हिँडेपछि बन्द हुन तम्तयार भएको सब वे भित्र पस्यौँ हामी । त्यहँ ओखलढुङ्गाका टङ्क खड्का र बैतडीका राजेन्द्र भट्टसँग भेट भयो मेरो ।
मित्रहरूले बाह्र इन्च लामो पाउरोटीमा मासु, सागपात, अनेक मसला र काँक्रा-गाजर कोचेर टुन्न फुलाएको 'सब' हातमा थमाए ।
'दाइलाई न्युयोर्कको चौरासी व्यञ्जन यही हो !'
खड्काले अमेरिकन डाइट मलाई थमाउँदै भने-'��"पसानी हाल्न यै जल प्रयोग गर्नु होला !'
हिाडिरहेका थियौँ हामी ।
जाडो लुगलुगाउँदो थियो । तैपनि अमेरिकाली गोरी युवतीका पिडुँला ह्वाङ्गै थिए । जाडो दाँत कटकटाउँदै थियो । तैपनि अफ्रिकाली अश्वेत सुन्दरीका बज्राँठ तिघ्रा उदाङ्गै थिए । हो ! तिनका कान, कपाल र टाउकामा स्काप, टोपी र रुमालको सजधज चैं घटेको थिएन ।
'भाइ, बहाना त विद्याआर्जन नै होला नि अमेरिका भित्रिने ?'
'हो, त्यही बाटो भएर अमेरिका आइयो । अहिले त्यो लक्ष्य कता पुग्यो, यतिखेर चैं हातमा काम मात्र छ ।'
जिउ हल्लाईहल्लाई गफ गरिरहेको अश्वेतहरूको ठूलो हुल थियो ।
'यी ओबामालाई ज्यान दिने कुरा गर्दैछन् !'
'भनेपछि राजनीतिमा पोल्टिक्स्.............!'
भट्ट छुटे । हामीले 'भी' मेट्रो चढ्न केही समय कुर्‍यौँ । भीड एकदम थियो । तैपनि रेल छोडेनौँ हामी तीनले ।
'यहाँ निकै नेपालीहरूको अनुहार भेटिन्छ । भेट्नु भएन ?'
टङ्कले भर्‍याङ झर्दा भने मलाई ।
'त्यस्तै लाग्दैछ मलाई !'
मैले कालो कपाल, नेपाली वर्णका, पहाडे जनजातिका रुपरङ्ग हिस्पानिकहरूको झुण्ड खुब देखिरहेथेँ । अझ रुपौला नारीको सङ्ख्या झन् उल्काको । हन, के बिदी राम्रा यी !
'एल' रेल चढ्यौँ हामी ।
भारतीय, हिस्पानिक, कोरियाली र अश्वेत अनुहारका युवायुवतीको रौस उल्कापातको थियो मेट्रोमा । युवकका बलिष्ठ छातीमा आफ्ना सुडौल शरीर लिपिस्सै टाँसेर नाँचिरहेका हिस्पानिकहरू अमिगो, अमिगा बोल्न पनि भ्याउँथे ।
'भाइ हिमाली स्वरहरूलाई खुराक कसरी जुटाउनु हुन्छ ?'
'इमेल बाहेक विकल्प छैन !'
'भनेपछि सबथोक यै भाँडो हो ?'
पश्चिम-दक्षिणतिरको रिजबुड ठाउँ रहेको सहदेवले सुनाए ।
'यहाँ नेपालीहरूको ठूलो उपस्थिति छ ।'
'सङ्ख्या कति छ ?'
'तीन-चार हजारको हुनुपर्छ !'
'यहाँ नेपाली मन्दिर बनाउने हाम्रो समाजको कुरा भइरहेछ ।'
'हिमाली स्वरहरू मार्फत् मैले पनि सघाइराछु !'
रातको एघार बज्यो-घर पस्दा । मधुरो बत्तीमुनि हिमाली स्वरहरूका निम्ति मेरा दुईवटा निबन्ध सहदेवले रेकर्ड गरे मेरै आवाजमा । बाँधिएका हात र भोटेताल्चा, एकादेशमा हाम्रा अनुहार रेकर्ड गरियो अनलाइन रेडियोका लागि ।
सहदेव भाइ नेपाली शब्दको प्रचारमा छन् । नेपाली भाव प्रसारमा अहोरात्र लागिपरेका छन् । नेपाली समाजको उकालीओह्राली बिस्तार गर्न खटेका छन् । त्यस महानगरका अभावमा डलरको जोहोभन्दा पहिचानको प्राप्तिका निम्ति समर्पित छन् निरन्तर ।
'भाइ, रेडियोको अझै भविष्य छ र ?'
'दाइ, मानिसहरू बिस्तारै फर्किरहेका छन् यसको मूल्यतिर !'
यस बीचमा पुलिस र दमकलको भ्यान चर्को आवाज ��"कलेर गए । हामी एक छिन थामियौँ, रेकर्डलाई बाधा परेको ठानी ।
निकै लामो त्यस उत्तेजित, भावुक र अनुभूतिमय यात्रामा तिनले बढी प्रश्नहरू गरे साहित्यबारे । सङ्गीतबारे जिज्ञासु देखिए । गीतबारे उत्तर खोजे ।
'मैले देश छोडेकोमा दुःखी छैन । यसै रेडियोले देशभित्र रहेको आडभरोसा मलाई सँधै याद दिलाउँछ, बुझ्नुभो दाइ !'
सहदेवले ल्यापटपमा रहेको हिमाली स्वरहरूको इमेल आइडीको पासवर्ड लगआउट गर्दै भने ।
न्युयोर्कको रात अझ मात्तिएको थियो । यो शहर नथाकेको देखेर म आफैँ गलेको थिएँ । उसको तरुन्याइँ देखेर उकुसमुकुस भएथ्यो मलाई । ��"छयानमा भए नि मन पुगेथ्यो धेरै पर-पर ।